विराटनगर महानगरका मेयर पराजुलीको कार्यकक्षमा बम विस्फोट
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली
काठमाडौं । आइतबार दिउँसो विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीको कार्यकक्षमा बम विस्फोट भएको छ ।
आइतबार दिउँसो २ बजे मेयरको आगन्तुक कक्षमा बम विस्फोट भएको हो । प्रहरीले कुकर बम विस्फोट भएको पुष्टि गरेको छ ।
बम मेयरको कार्यकक्षबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष जाने प्यासेजमा विस्फोट भएको हो । बम विस्फोटले महानगरपालिका कार्यालयको झ्यालका सिसा फुटेका छन् । दराजमासमेत क्षति पुगेको छ ।
बम विस्फोटबाट मेयरको गाडीमा क्षति पुगेको छ । विस्फोटपछि कार्यालयमा कर्मचारीको भागदौड चलेको थियो ।
बम कसले बिष्फोट गर्यो ? किन गर्यो ? भन्ने विषयमा अनुसनधान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बम विस्फोटबाट क्षति पुगेको मेयर भीम पराजुलीको गाडी ।
मेयर भीम पराजुली